UMareNostrum 4, ikhompyuter ephezulu yeSpanish, ngoku ukulungele ukusebenza | Iindaba zeGajethi
UMareNostrum 4, ikhompyuter ephezulu yeSpanish, ngoku ukulungele ukusebenza
Ukuba ungumthandi wekhompyuter, ngokuqinisekileyo ngamanye amaxesha uyibonile Uluhlu lwezona zinto zibalaseleyo emhlabeniNgokucacileyo ilawulwa yi-China kunye ne-United States nangona ingekude kwezona zibalaseleyo emhlabeni sifumana i-supercomputer yaseSpain ethi namhlanje, ngenxa yendaleko yayo entsha. igqithile nakwi-NASA ngamandla amakhulu.
Ngokuqinisekileyo uyazi ukuba sithetha ngayo I-MareNostrum 4, irhamncwa lekhompyuter namhlanje elibekwe kwindlu endala yenkonzo, ngokukodwa kwi Inqaba yeGirona ngaphakathi kwiziko elibizwa ngokuba yiBarcelona Supercomputing Centre okanye mhlawumbi eyaziwa ngcono kuzwelonke, ubuncinci bendihlala ndiyiva ngale ndlela, njengeZiko leSizwe lokuThintela abaMandla.
Ukuya kwiinkcukacha ezithe kratya sithetha ngekhompyuter enikezwe amandla aphezulu 11,1 IiPetaflopsOko kukuthi, iyakwazi ukwenza imisebenzi engaphantsi kwe-11.100 yezigidigidi ngomzuzwana, amandla aya kukhula aye 13,7 IiPetaflops Nje ukuba iklasta yenjongo yayo ngokubanzi, enama-racks angama-48 eneenombolo ezingama-3.456 zizonke, iyakwandiswa ngamacandelo amathathu amatsha, amatsha, kwiinyanga ezizayo. Onke la mandla namhlanje anikezelwe kuphela kuphando.
Njengeenkcukacha, xelela ukuba zonke izihloko zalo matshini zinomtsalane azikho ngaphantsi kweetshipsi ezimbini ze-Intel Xeon Platinum, zona, ezineeprosesa ezingama-24 nganye nganye. Ukuba sibala ngokukhawuleza sifumanisa ukuba iMareNostrum 4 inenani lilonke Iiprosesa ezingama-165.888 kunye nenkumbulo esembindini ye-390 Terabytes.
Ukungena nzulu kwiindaba eziza kuza kungekudala kwiMareNostrum 4 sifumanisa ukuba izihloko ezibini ezitsha eziza kufakwa kungekudala kulo matshini ziya kwahluka ngengqondo ethile, kwelinye icala enye yazo iya kuphuhliswa e-United. Amazwe kwaye aya kubandakanya iiprosesa ezinje ngeveli IBM POWER9 kunye neNVIDIA Volta GPUs, ngokwaneleyo ukubonelela ngecomputer amandla amakhulu kune-1,5 Petaflops ngelixa amaqela amabini aseleyo ephuhliswa eJapan kwaye aya kuthi emva koko abaneeprosesa. I-ARMv8 kunye ne-Intel Knights Hill, yanele ukubonelela nge-0,5 Petaflops nganye.
1 I-MareNostrum 4, yeyona 'yahlukileyo kwaye inomdla kwihlabathi'
2 Iluncedo kangakanani iMareNostrum 4?
UMareNostrum 4, 'eyahlukileyo kwaye inomdla kwihlabathi'
Enkosi kulo lonke olu phuculo, iMareNostrum 4 iya kubonelela nge- amandla ekhompyutha ngaphandle kwamaxesha ali-10 ngaphezulu kunangaphambili ngelixa, ngoku ukusetyenziswa kwamandla, oku nje izakonyusa iipesenti ezingama-30. Ngaphandle kwamathandabuzo uhlaziyo olunomdla ngakumbi, kokubini ekwandiseni amandla kunye nasekuxubeni iitekhnoloji ezahlukileyo, into ethi yona, ibize ukubizwa njengekhompyuter enkulueyahlukileyo kwaye inomdla kwihlabathi'.
Ukuba sijonga uluhlu lwee-supercomputer ezinamandla emhlabeni, ezihlaziyiweyo nge-19 kaJuni, siyifumana I-MareNostrum 4 ikwinqanaba le-13 njengekhompyuter ekhawulezayo kwihlabathi nangaphambi kweziganeko zokwenyani ezinje ngePleiades, ikhompyuter eyintloko ehlala kwiZiko loPhando le-Ames le-NASA. Kwinqanaba laseYurophu, MareNostrum 4 uhlala kwifayile ye- Indawo yesithathu okoko, emva kolu hlaziyo, kwinqanaba lamandla kugqitywa kuphela yiSwitzerland Piz Daint kunye nekhompyuter abayifakileyo kwiOfisi yeMeteorological yaseUnited Kingdom.
Iluncedo kangakanani iMareNostrum 4?
Namhlanje iMareNostrum 4 yile ziyafumaneka kuzo zonke izazinzulu eYurophuNgokukodwa, inokusetyenziselwa ukucubungula ukubala okukhulu kwaye ngakumbi ukulinganisa okunzima okanye, kwezinye iimeko, kuhlalutyo lweedatha ezinkulu. Umzekelo ocacileyo wento esetyenziswayo ngoku zizicelo eziza kufakelwa xa zisebenza kwakhona apho sifumana uninzi olunxulumene neenkalo ezahlukeneyo ezinje ngokutshintsha kwemozulu, isitofu sokugonya i-AIDS, ukufundwa kwamaza omxhuzulane umhlaza kunye nokulinganisa kwimveliso yamandla okuxuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UMareNostrum 4, ikhompyuter ephezulu yeSpanish, ngoku ukulungele ukusebenza
UAlvaro Moreno Gutierrez sitsho
Ukuba uku-Barcelona akayena umSpanish. Ngokukhawuleza ukuba amaCatalan ayazi, baya kuqala ukuyithetha kwaye ukuba kukho into efumanekayo enkosi kweli qela, baya kuthi ngumbulelo kwikhompyuter yabo.
Phendula u-vlvaro Moreno Gutiérrez
Iindawo zokuhlala iWiFi zasimahla ziza eLondon
IXiaomi iveza iprojektha yele laser engaphantsi kweedola ezili-1500